Ndiyakwamkela ku Ulwazi Ukuprinta!
Iingubo kunye neebhokisi zeWig
Ukuprintwa kweencwadi eziLukhuni
Ukuprintwa kweencwadi zesoftware
Ukuprintwa kweencwadi zokuhombisa
Imibala yokuPrinta iincwadi
Incwadana / Iifayile ezi-Folder / Iflaya / Iposta
Incwadana / neeNamards
Iflaya / Iposi
Amakhadi eF Flash yemfundo
Iimveliso Sele zikulungele Ukuthumela
I-brand New 2019
ngu admin nge-20-02-08
Ngo-Matshi, i-2019, i-logo yethu kunye negama lesizinda labhaliswa ngempumelelo, emva koko satyala imali nge-usd100,000 ukukhuthaza kwiiwebhusayithi ze-B2B zamanye amazwe. Oku kuphawule ukuqala kwethu kolawulo lweshishini. NgoJulayi ngo-2019, saqala ukwakhiwa kwewebhusayithi yethu, samisela isebe lethu lokusebenza kwaye sahlawula ngaphezulu ...
Sithathe inxaxheba kumboniso we biennial wokupakisha kunye nokuprinta, ukurekhoda nokufundisisa izixhobo zangaphambili kunye nembono entsha yetekhnoloji. Oku kulungile kakhulu kuphuhliso lwethu lwexesha elizayo.
Intlanganiso yonyaka ngo-2018!
Kwintlanganiso yonyaka ngo-2018, inkampani yethu yasindulula ngokusesikweni inkqubo yobambiswano. Omnye umntu osebenza naye waba liqabane lokuqala lenkampani kwaye wanikwa izabelo kunye nemivuzo. Kwintlanganiso yonyaka ka-2018, inkampani icacisile kubo bonke abasebenzi benkampani indlela yokuphucula ikamva ...
Umthengi ovela kumboniso weza kusityelela
Kulo nyaka, umthengi wethu we-VIP, obesebenzisana nathi iminyaka engaphezu kwemihlanu, esiza kusityelela, wathetha-thethana naye ngemicimbi ye-arhente kwaye watyikitya isivumelwano sonyaka. Sasivuya kakhulu ukuba nesiqalo esihle!
Urhwebo lwangaphandle lwangaphandle luqala
Siqale urhwebo lwangaphandle. Ukusukela ngonyaka ka-2017, siqalise urhwebo lwangaphandle. Ngaphambi kwalo nyaka, sigubungele kuphela imarike yasekhaya, kodwa ngakumbi nangakumbi abathengi bangaphandle batyelele iinkampani zethu. Ke, ngokonyuka kwevolumu yeshishini lethu, simisela isebe lokuthengisa, elithetha ukuba ...
Ngonyaka ka-2016, safumana i-odolo yokupakisha yeyona khampani inkulu yasekhaya neyona ilungileyo-iHuji Hua. Banyule thina ekugqibeleni, emva kwemijikelezo yokhetho. Yonke inkampani yethu yayonwabile kwaye ichulumancile! Lo msitho awuphawulanga kuphela ukuphuculwa kwamandla kwenkampani, kodwa nakwimpembelelo ...
Iqela lethu lokuthengisa lagqitha kumakhulu abantu
Unyaka ka-2015 ibingunyaka otyibilika emhlabeni. Iinguqu ezintsha zenzekile kuzo zonke iindlela zokuthengisa zangaphandle kunye neepateni ezintsha zaphuma. Saqala ukufunda itekhnoloji kunye nokuqeqesha iqela lethu. Kulo nyaka, iqela lethu lokuthengisa ladlula ngaphezulu kwekhulu labantu.
Ndwendwela umboniso ukuze ufunde ngakumbi malunga nentengiso
Ngo-2014, sajongisa kwimiboniso yethu yasekhaya neyangaphandle saza satyelela indawo efanelekileyo yokupakisha eGuangzhou kunye nomboniso eDubai. Kwaye safumana okuninzi.
Umgangatho wemveliso bubomi benkampani yethu
Ukusukela kunyaka ka-2013, sinikele ingqalelo kakhulu kumgangatho wemveliso saza sakhupha iiodolo ezazingenasicelo malunga naso. Kwintlanganiso yonyaka, siphakamise umxholo obizwa "Umgangatho bubomi bethu".
Ukuqala kwenkampani yethu
Ngonyaka ka-2012, iQingdao Shuying Commerce Trading Co, Ltd yasekwa, eyaphawula ukuba sivelise zonke iimpahla egameni lenkampani ukusukela ngoko ukuya phambili kwaye besingeyondawo incinci yokusebenza.
Inombolo kanomyayi: 18561833685
Idilesi: RM1604, Hengtai Mansion, No.127 Liaoning Rd, Shibei District, Qingdao China 266012
Mon-Fri: 09AM ukuya ku-06 PM
Sat - Ilanga: 09AM ukuya ku-06 PM